Dowladda Kenya oo Ka Digtay Weeraro Al-Shabaab Ka Geystaan Gudaha Dalkeeda – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Dowladda Kenya oo Ka Digtay Weeraro Al-Shabaab Ka Geystaan Gudaha Dalkeeda
Police-ka dalka Kenya ayaa bixiyey digniino ku aadan macquul ahaanshiyaha Al Shabaab ay weeraro argagixiso uga fulin karaan gudaha dalka Kenya.
Adeegga police-ka ee qaranka ayaa sheegay in ay aad u adkeeyeen ammaanka si loo sugo amniga muslimiinta cibaadeysanaya iyo si looga hortago weeraro ay macquul tahay in lala beegsado kaniisado.
Qoraal uu ku saxiixnaa afhayeenka police-ka Kenya Charles Owino ayaa lagu sheegay in dagaalyahanada Al Shabab ay taariikh ahaan u leeyihiin fulinta weeraro argagixiso inta lagu guda jiro bisha Ramadan.
“Al-Shabaab waxa ay taariikh ku leeyihiin fulinta weeraro fara badan. Intii lagu guda jiray bisha Ramadhan shan sano kahor ama bishii June sanadkii 2014 oo kaliya, 150 ruux ayaa ku nafwaayey weeraro ay dagaalyahanada Al-Shabaab ay ka fuliyeen xaafado kamid ah County-ada Lamu iyo Tana River ayaa lagu yiri qoraalka uu ku saxiixnaa Charles Owino.
Waxa uu sidoo kale afhayeenku soo hadal qaaday weeraradii bishii March ee sanadkan lala beegsaday labo masjid oo ku yaallo magaalada Christchurch ee dalka New Zealand, waxaana weeraradaas ku naf waayey in ka badan 50 qof oo muslimiin ah kuna cibaadeysanayey masaajiddaas.
Charles Owino ayaa sidoo kale dul istaagay qaraxyadii siddeeda ahaa ee bishii hore lagu weeraray kaniisado iyo hoteelo ay deganaayeen dad ajaaniib ah oo ku yaallo dalka Sri Lanka, weeraradaas qaraxyada ahaa ayaa gallaaftay nolosha in ka badan 300 oo qof halka ay ku dhaawacmeen tiro ka badan 500 oo ruux.
Qoraalka kasoo baxay police-ka Kenya ayaa lagu sheegay in Al Shabab ay kordhiyaan weeraradooda bisha Ramadan iyagoo tusaale ka dhiganaya dagaalkii Beder oo dhacay 17 ka Ramadan, dagaalkaas oo ahaa kii ugu horeyey ee muslimiintu ay la galeen gaaladii qureesh ayaa waxa ay ka gaareen guul weyn.
Afhayeenka police-ka Kenya ayaa xusay inay ciidamo dheeri ah la geeyey meelaha qaar si loo xaqiijiyo xasiloonida iyo nabadda dalka inta lagu guda jiro bishan Ramadan iyo maalmaha ka dambeeya ee ciidda ah.